Madaxweynaha Eritrea Isias Afewerki oo gaaray Addis Ababa (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Dibadda > Madaxweynaha Eritrea Isias Afewerki oo gaaray Addis Ababa (Sawirro)
July 14, 2018 admin690
Socdaalkiisa ayaa la filayaa inuu qayb ka qaato isku soo dhoweynta xiriirka labada dal oo labaatankii sano ee la soo dhaafay aad u liitay. Xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsi ee labada dal ayaa go’naa tan iyo wakhtigaas, waxaana sidoo kale kala irdhoobay qoysas wada dhashay ama xidid ahaa.
Xurguftii labada dal dhex martay ayaa noqotay mid gobolka ku fidday. Tan iyo markii uu dhowr bilood xukunka qabtay ra’iisul wasaare Abiy Axmed, Itoobiya waxaa ka socday isbeddello siyaasadeed iyo kuwo milateri, wuxuuna sidoo kale isku dayayey inuu dib u hagaajiyo xiriirka uu dalkiisu la leeyahay waddamada gobolka.
Guddiga kormeerka deegannada xadka ah ee lagu muransan yahay ayaa la sameeyay, ka dibna waxaa laga la gaaray heshiis magaalada Badme lagu siiyay Eritrea, halka Itoobiya ay diiday inay aqbasho in magaaladaasi lagu wareejiyo Eritrea. Wixii intaasi ka dambeeyay xaaladda xadka labada dal way kacsanayd.
Isha: BBC+ Wakaaladaha Wararka
Tagged abiy ahmed addis abeba adis ababa itoobiya Madaxweynaha Eritrea Isias